Ny fiakarana fanamboarana fiara azo alaina dia azo nakarina, famolavolana vaovao, mora ampiasaina, ampiasaina indrindra amin'ny fikojakojana fiara, ny fampiasana an'io fitaovana io dia afaka mampiakatra mora foana ny haavon'ny fiara, ireo mpiasa hikarakara mety hanamboatra ny fiara.
Ny vokatra dia 115cm ny halavany ary afaka miakatra sy milatsaka amin'ny ambaratonga 25-38cm. Vita amin'ny vy izy io ary manodidina ny 19-25kg ny lanjany tokana.
Ataovy mora foana sy milamina ny fampidirana menaka fanamboarana solika fiara eo am-pototry ny fiara
Ny roller bozaka dia mety amin'ny famongorana ny simba ary manampy amin'ny fametrahana fitomboana vaovao ho an'ny bozaka tonga lafatra sy mahasalama. Ny safidy voalohany amin'ny fiara fialamboly ivelany, mety, azo ampiharina ary mahomby. Fiarovana ny tontolo iainana. Alohan'ny fambolena voa vaovao, ny roller bozaka dia afaka manampy amin'ny tany tsy mitovy. Aorian'ny famafazana dia manampy amin'ny fanafainganana ny fitsimohany ny fihodinana, amin'ny alàlan'ny fiantohana fa mifampikasoka amin'ny tany ny voa. Mampiasà ahitra feno bozaka feno rano mba hanampiana ny sod vaovao hampiorina azy, hanala ny paosin-drivotra ary hiantohana ny fakany hifandray amin'ny tany. Raha manimba ny ahitra anao ny biby mpikiky sy ny bibikely, dia manampy amin'ny fanalefahana ny bozaka ho an'ny fitoviana ny rozika sy ny bibikely.
Ny safidy voalohany amin'ny fiara fialamboly ivelany, mety, azo ampiharina ary mahomby. Fiarovana ny tontolo iainana. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny fotoana fialamboly an-kalamanjana maro, toy ny mankany amin'ny valan-javaboary hitsangatsangana, ny fandehanana any ivelany dia azo ampiasaina hitaterana sakafo, rano, kojakoja sns. Mandehana amin'ny sary hosodoko, fialam-boly sns ... azo ampiasaina hanangonana ireo zavatra ilaina, mora ampiasaina.
Ataovy mora foana sy milamina ny fanaovana ny serivisy fanoloana solika fiara eo am-pototry ny fiara .Vita amin'ny polyester fikarakarana maharitra sy mora, rafitra vy marokoroko - Rafitra mifamatotra haingana ny kodiarana ,, Fampifanarahana mifangaro amin'ny sisin-javatra Mesh Ataovy azo antoka ny fivezivezin'ny rivotra tsara, miaraka aloha sy varavarana aoriana, rivotra boribory ary mpiaro orana eo am-baravarana voalohany, Top Mesh Net miaraka amin'ny fonony azo fehezina; miaraka amina tadiny sy taratra taratra
Kamio mixer, Caster Wheel, Kodiarana PU, China Concrete Mixer, China PU Wheel, Sina PU Foam Wheel,